FSX zuru ezu ma zuru oke nkọwa nhazi Koodu
ajụjụ FSX zuru ezu ma zuru oke nkọwa nhazi Koodu
1 afọ 5 ụbọchị gara aga #980 by DRCW
Nke a nyere ESP onye mepụtara usoro FSX. Ị ga-achọ ịjụ saịtị a ma nwee otu n'ime akwụkwọ gị.
na ozi a na mbara igwe bụ n'ezie njedebe maka ike ịme mgbanwe na ụgbọelu gị na ihe karịrị.
1 afọ 5 ụbọchị gara aga #981 by Gh0stRider203
oh, ya mere, m nwere ike kwadebe My 777 na afterburners? ụtọ! ^ _ ^ lol
1 afọ 5 ụbọchị gara aga #982 by Gh0stRider203
Enwere m otu ihe ị ga - enwe ike inyere m aka ....
kedu ka m ga - esi gbakwunye ebe mposi n'ọdụ ụgbọ elu? Kpọmkwem, ụfọdụ na KDFW n'ihu American Airlines 'Maintenance Hangar #5 prnt.sc/ie8djp
1 afọ 5 ụbọchị gara aga - 1 afọ 5 ụbọchị gara aga #983 by DRCW
Nke a bụ otu ebe m na-agbanyeghị na FSX, M ugbu a ka m na-agba ọsọ P3Dv4 nke na-echere 64 bit ESP platform. Nke a bụ vidiyo nkuzi m chọpụtara nke nwere ike ịbụ ihe bara uru. Enweghị m oge m ga-eji ya, mana nke vidiyo niile m lere anya, nke a yiri ka ọ ga-akọwa ya nke ọma
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 5 ụbọchị gara aga site na DRCW.
1 afọ 4 ụbọchị gara aga #988 by DRCW
Nke a bụ ihe atụ maka gị nke ọdụ ụgbọelu autopilot CFG autopilot ngalaba
fuel_flow_gain = 0.002 // Na-enweta mmanụ ọkụ
rated_N2_rpm = 29920 // RPM, ihe nkedo nke okpukpu abụọ gosiri uru
na-esoghị = 0 // Afterburner dị?
Ihe a na - eme ka ọ bụrụ na ọ bụ naanị 0.385 // Na -
A ga-edozi afterburner = = 1) 0 pụtara ụgha na 1 pụtara eziokwu, I nwere ike ịmalite ịmr engine gị na Static_ Thrust = ntọala. M ga-ekepụta post na isiokwu a n'oge na-adịghị anya.